मतदानमा प्रधानमन्त्रीदेखि उम्मेदवारसम्म - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मतदान गरेका छन् । कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले गन्यापधुरा गाउँपालिकाको रुवाखोलास्थित असिग्राम मावि मतदान केन्द्र ‘ख’ बाट मतदान गरेका हुन् ।
मतदानका लागि प्रधानमन्त्री देउवा शुक्रबार बिहानै धनगढीबाट डडेल्धुरा पुगेका थिए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मतदान गरेका छन् । भक्तपुरको सूर्यविनायक–२ स्थित महेन्द्र शान्ति माविबाट मतदान गरेका हुन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले चितवनबाट मतदान गरेका छन् ।
प्रचण्डले भरतपुर १४ स्थित नेपाल पुलिस स्कुल शान्तिपुरबाट मतदान गरेका छन् । उनले बुथ नम्बर ञकझ बाट मतदान गरेका हुन् । उनले पहिलो मतदान गरेपछी मतदान कार्य सुरु भएको हो ।
यहाँ २ वटा मतदान केन्द्र छन जसमा जम्मा १६७८ मतदाता रहेका छन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मतदान गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिका–१ को मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।उनले गौर १, भन्सार बजार नजिक रहेको कन्या प्राथमिक विद्यालय मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि मतदान गरेका छन् । उनले गोरखाको पालुङटार नगरपालिका १ स्थित अन्नपूर्ण माविको मतदान केन्द्रमा गएर मतदान गरेका हुन् ।
स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–४ कुविण्डेस्थित सेतीदेवी पञ्चकन्या माध्यामिक विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेको उनका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले बताए ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा मदतान गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा हिजोनै गृहनगर आइपुगेका थिए । उनी चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–५ कुविण्डेका मतदाता हुन् । सभामुख सापकोटाले उक्त केन्द्रबाट पहिलो मत खसालेका छन् ।
सभामुख सापकोटाका भाइ कृष्णप्रसाद सापकोटा चौतारा नगरमा प्रमुखको उम्मेदवार छन् । उनी माओवादी–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार बनेका हुन् ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले मतदान गरेका छन् । उनले रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका –८ ज्योति मावि ज्योतिनगर मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।
उनी मतदानतका लागि बिहीबार नै पुगेका उनको प्रेस सल्लाहकार मधुसुधन भट्टराईले जानकारी दिए ।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले मतदान गरेका छन् । झापाको हल्दिबारी गाउँपालिकां–१ को कार्यालय रहेको केन्द्रबाट उनले मतदान गरेका हुन् ।
देशभर शुक्रबार बिहान ७ बाट स्थानीय तह निर्वाचन भइरहेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले मतदान गरेका छन् । उनले नेपाल युवक मावि पक्नाजोलमा मतदान गरेका हुन् ।
उनीसँगै उनकी श्रीमती तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरकी उम्मेदवार सिर्जना सिंहले पनि सोही मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छिन् ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले मतदान गरेका हुन् । उनले बुटवलस्थित डिभिजन सडक कार्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रमा मतदान गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले मतदान गरेका छन् । उनले गृहजिल्ला झापाबाट मतदान गरेका हुन् ।
महामन्त्री शर्मा मेचीनगरबासी हुन् । उनले मेचीनगर–९ स्थित कविशिरोमणि मावि मतदान केन्द्रबाट मतदान गरे ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन शाह) ले मतदान गरेका छन् । बिहान ठिक ११ बजे उनले सिनामंगलस्थित अन्नपूर्ण इंग्लिस स्कुलमा पुगेर उनले मतदान गरेका हुन् ।
एमालेबाट मेयर पदमा उम्मेदवारी दिएका केशव स्थापितले काठमाडौं–२८ बागबजारस्थित मतदानस्थलबाट बिहान ७ बजेपछि मतदान गरेका हुन् । स्थापितले मतदान सुरु भएलगत्तै मत दिएका हुन् ।
भरतपुर महानगरपालिका मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहालले मतदान गरेकी छन् । दाहालले भरतपुर–१४ स्थित आधारभुत विद्यालय सुन्दरवस्तीबाट मतदान गरेकि हुन् ।
विवेकशील साझा पार्टीको काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर उम्मेदवार समीक्षा बास्कोटाले मतदान गरेकी छिन् । काठमाडौं मध्य बानेश्वरस्थित भ्याली भ्यु स्कुल केन्द्रबाट मतदान गरेकी हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा विवेकशील साझाबाट मेयर र उपमेयरमा महिला उम्मेदवार छन् ।
एमालेबाट हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार अनन्त पौडेलले मतदान गरेका छन् । उनले हेटौंडा–९ स्थित प्रगति माध्यामिक विद्यालयबा मतदान गरेका हुन् । उनी संविधानसभा सदस्य समेत रहेका थिए ।
राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापाले हेटौंडा उपमहानगरपालिका ६ स्थित बंशगोपाल उच्च माविमा रहेको मतदान केन्द्र्रबाट मतदान गरेका छन् ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका वरिष्ठ नेता दिपक बोहराले रुपन्देहीको सिद्धाथर्गनगर– ३ बाट मतदान गरेका छन् ।
पूर्वस्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका नेता बोहराले सिद्धार्थनगर ३ स्थित खजहना माविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेका हुन् । बिहान ७ बजेबाट सुरु भएको मतदान कार्यक्रममा सहभागी हुन नेता बोहरा बिहीबार गृह जिल्ला आएका थिए । ७ बजेर ५ मिनेटमा उनले मतदान गरेका हुन ।
त्यो उम्मेदवार जसले अरूको मत पनि पाएनन्, आफ्नो मत पनि हराए - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
चौतर्फी आलोचनापछि आयो निर्वाचन आयोगको यस्तो आदेश - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
प्रतिनिधि बस्न बालेन साह पुगे ललितपुरको मतगणनास्थल - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
महानगरपालिकामा गठबन्धनका दलबीच एकअर्कालाई धोकाधढी - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
यी स्थानमा आज मतदान - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
काठमाडौंमा बालेनको अग्रता कायमै - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
मोदीको नेपाल भ्रमण : यी समझदारी पत्रमा भए हस्ताक्षर - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
‘देखिस् कांग्रेस एमाले, जनताले भोट काँ हाले’ भन्दै बालेनको पक्षमा नारा - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय कमकक्षी मोदीले मायादेवी मन्दिरमा एकसाथ गरे प्रार्थना - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
बालेन शाहको अग्रता दोब्बर, आधा मतान्तरले पछ्याउँदै केशव स्थापित - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
आज कुर्म जयन्ती, भगवान विष्णुले कछुवा अवतार लिएको दिन - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
काठमाडौंमा एक मत गन्न २० मिनेट समय - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
नेताले मत दिए,देशलाई मन पनि देलान ! (फोटो फिचर) - Mero LifeStyle Mero LifeStyle